पाँच दशकको इतिहास बदल्न महासंघमा लड्दै छु: किशोर प्रधान (अन्तर्वार्ता) « Lokpath
२०७७, ३० असार मंगलवार ११:००
प्रकाशित मिति : २०७७, ३० असार मंगलवार ११:००
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी साउन २६ र २७ गते हुने ५४ औं बार्षिक साधारण सभाले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । महासंघको विधानमा भएको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले महासंघको चुनाबमा बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
२८ वर्षअघि उद्योग संगठन मोरङको महासचिव हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिमा प्रवेश गरेका किशोर प्रधान वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी हुन् । ५३ वर्षको इतिहासमा उद्योग वाणिज्य महासंघमा जिल्ला नगरबाट कोही पनि अध्यक्ष बन्न नसकेको बताउने प्रधान हाल जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत छ प्रधानसँग महासंघको चुनावी गतिविधि, एजेण्डा र आगामी योजनाको सन्दर्भमा लोकपथले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
लक्ष्य प्राप्तिका लागि मान्छेले एकपटक हार खाँदैमा लक्ष्य छोडेर मैदानबाट बाहिर निस्कने हो भने लक्ष्य प्राप्ति कहिल्यै हुँदैन । मेरो लक्ष्य भनेको अर्जुनले माछाको आँखाको नानी हेरेजस्तो उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदमा पुगेर सेवा गर्ने हो । कसलाई सेवा गर्ने ? साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीलाई माथि उठाउने, उनीहरूको पेशालाई वृद्धि गर्ने, उनीहरूको रहन सहनको स्तरोन्ति गर्ने र ठूला उद्योगीहरूलाई सहयोग गर्ने । यो क्रममा एउटा क्रम भङ्ग भएर म पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा हारे पनि अहिले निर्वाचन जित्ने गरी तपाईंहरूको सामुन्ने आएको छु । विश्वास गर्नुस् यसपटकको लक्ष्य हासिल गरेर नै म महासंघका साना, मझौला र ठूला उद्योगी लगायत सम्पूर्ण वर्गलाई सेवा गर्छु र विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगीहरूको जीवनस्तर विकासका लागि महासंघमार्फत एउटा सन्देश दिने प्रयास गर्नेछु । यसपटकको अध्यक्ष निर्वाचित भइसक्नु भएको शेखर गोल्छाको टिममा बसेर उहाँका भावनाहरूलाई, भिजनहरूलाई कार्यान्वयन गरेर र हाम्रो टिमको भिजनलाई समेत महासंघमा राखेर अघि बढाउँछांै । जुन खस्किएको इमेज छ भनी बजारमा भनिएको छ । यसलाई वृद्धि गर्ने र उद्योगी व्यवसायीको सम्मान हुने किसिमको वातावरण बनाउनका लागि किशोर प्रधान फेरि अगाडि आएको छ ।
बजारमा हल्ला के छ भने किशोर प्रधान नेगोशेसन गर्न आएको छ र कुनै पनि बेला चुनाव प्याक गरेर जान्छ भन्छन् ? यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
भनिन्छ, महासंघको चुनावी राजनीति र यसभित्रको फोहोरी राजनीतिको पाटो केलाउँदा उम्मेदवार र पदाधिकारीभन्दा बाहिरका खेलाडीहरु धेरै हावी हुन्छन् । अहिले चण्डी ढकाल भर्सेस किशोर प्रधान टिम देखिएको छ । महासंघको यो राजनीतिक खिचातानी कसरी पार लगाउनु हुन्छ ?
यो पनि महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । खेद प्रस्ताव भनेको कस्तो हो भने उहाँले अध्यक्ष र निर्वाचित अध्यक्ष दुवैलाई हैसियत देखाउने कुरा जुन किसिमले पत्रपत्रिकामा दिनुभयो । त्यसमा म के भन्छु भने, ‘आजभन्दा आठ/नौ महिना अघि एक किसिमको पब्लिक न्युजलाई मैले शेयर गर्न पुगे,’ त्यसमा मलाई ठूलो लान्छना लगाइयो, उहाँबाट नि लगाइयो, उहाँमार्फत मेरा केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले पनि यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन र यसमा माफी माग्नुपर्छ भने पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमै माफी माग्नुपर्ने भयो । जब मैले माफी मागे, उहाँले अहिलेको अध्यक्ष र आगामी अध्यक्षलाई पनि लान्छना लगाउनुभयो । मलाई मनमा चोट थियो, नचाहँदा–नचाहँदै पनि एउटा पब्लिक न्युज शेयर गर्दा मैले माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँले पनि कमसेकम पदाधिकारी बैठकमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले प्रस्ताव राखेको हो । त्यो प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले त्यो बेलामा भइगो यो विषय अब यहीँ समाप्त गरौं, मैले गल्ती गरे भनेर भन्नुभएको भए कुरा त्यहीँ समाप्त हुन्थ्यो । तर, दुर्भाग्यवश उहाँले त्यो कुरा भन्न रुचाउनु भएन् । त्यो भर्चुअल मिटिङ थियो, त्यसबाट पास भयो ।
भ्रष्टाचारको हल्लाको कुरा गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि आउँछन् । अहिलेको अवस्थामा मिडियाले वास्तविकताभन्दा टाढा रहेर सूचना प्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । एफएनसीसीआईको अध्यक्षको विषयमा जुन कुरा भन्नुभएको छ । त्यो सरासर गलत कुरा हो । प्रक्रियामा काम गर्दा कति सफल र कति असफल भन्ने कुरालाई फिल्ड मै गएर हेर्न पर्ने हुन्छ । कसैलाई रिस उठ्यो र उजुरी हाल्यो भने तपाईं चोर हो भनेर भन्न मिल्छ र ? कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदा न्यायिक चिरफार पछिको निर्णयलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । न्यायिक फैसला आफंैले गरेर कसैलाई पनि आरोप लगाउन हुँदैन । एफएनसीसीआईको कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि लैजाने भन्ने हेतुले नै हामी आगामी नेतृत्वका लागि चुनाव लड्न लागेको हौं ।
चुनावी वातावरण तात्दै गर्दा एफएनसीसीआईका पूर्व तथा अहिलेका पदाधिकारी र महासंघमा चासो राख्नेहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?